Khasaare Intee La Eg Ayaa Ka Dhashay Dagaalkii Afgooye? – Goobjoog News
Khasaare Intee La Eg Ayaa Ka Dhashay Dagaalkii Afgooye?
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay fiidkii waxa uu ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabelle Hoose, waxaana dagaalkaasi uu geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka ayaa ku biloowday gaari Ismiidaamin ah oo Al-shabaab ay la eegteen saldhig ciidamada Booliiska ku lahaayeen degmada Afgooye, waxaana intaasi xigay dagaal xooggan.
Ugu yaraan 10 qof ayaa dagaalkaasi ku geeriyootay, waxaana kamid ah dadka geeriyoodey isku duwihii maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed ee gobolka Shabellaha Hoose Maxamuud Qooleey iyo Labo sarkaal oo ka tirsan ciidanka dowladda Federaalka.
Inta dagaalkan uu socday waxay Al-shabaab ku faafeen xaafado badan oo ka tirsan degmada Afgooye, inkastoo ugu dambeyn ay dib uga baxeen meelihii ay qabsadeen.
Xaaladda guud ee degmada Afgooye saakay waa mid deggan, waxaana guud ahaan degmadaasi ku sugan ciidamada dowladda Federaalka ah.
Waxaa jira dad shacab ah oo waxyeello kasoo gaartay dagaalladaasi, iyadoo dadka dhaawaca ah loo soo qaaday Isbitaallada magaalada Muqdisho.
Ibraahim Aadan Cali oo ah guddoomiyaha gobolka Shabellaha Hoose ayaa u sheegay warbaahinta in gaariga ay Al-shabaab qaraxa ku fuliyeen inuu ahaa gaari Homey ah oo qudaar lasoo saaray.
Al-shabaab ayaa dhankooda warbaahinadooda ka sheegtay in guul ay ka gaareen dagaalkii shalay ka dhacay degmada Afgooye.
Xildhibaan Cabdi Cali oo Ka Hadlay Farqiga u Dheexeeya Doorashadii 2012 iyo Tan Hadda 2016
Tmjivx mzsqiz Cialis medication buy cialis online
Vzsaez qixyfp Buy viagra now online pharmacy
Yakuab iowabs pharmacy online Ddljj...
equifax business credit report [url=http://checkcreditscorew...
viagra without doctor prescription http://viacheapusa.com/...
Rjgavr ustiny walmart pharmacy Yovze...
Bpatod rsjaoy rx pharmacy Zdmfn...